Nokia ga-ahụ maka ntinye nke netwọk 5G na Malaysia | Gam akporosis
Nokia jiri ohere ọjọọ nke Huawei gbasaawanye ọnụnọ ya na 5G
Nsogbu ndị a na-arị elu maka Huawei. Companylọ ọrụ China, nke ka nwere ike nwee ohere ịzọpụta, lee ka ire ahia gi siri nwee malitere ịda n'ọtụtụ ahịa. Ọzọkwa, ọnụnọ ya na nsụgharị 5G zuru ụwa ọnụ nọkwa n'ihe ize ndụ. N'ezie, enwere ụfọdụ mba achọtala ihe ọzọ. Nke a bụ ihe banyere Malaysia, onye ga-aru oru na Nokia n'echiche a.
Nokia abanyela nkwekọrịta na Malaysia, iji rụọ ọrụ na mgbasawanye netwọkụ 5G na mba ahụ. Otu nkwekọrịta na ụbọchị ya gaara abụ nke Huawei, mana n'ihi nsogbu nke ụlọ ọrụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ụlọ ọrụ Finnish na-ebute ụzọ.
Ọ bụ nkwekọrịta afọ atọ, dị ka usoro mgbasa ozi dị iche iche si kwuo na mba ahụ. N'ụzọ dị otú a, Nokia ga-ahụ maka ọrụ, ya na U Mobile, maka itinye teknụzụ a na mba ahụ. Netwọk nke doro anya na ọ dị ezigbo mkpa, na-eme ka ọ bụrụ nkwekọrịta bụ isi maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ọzọkwa, na njedebe nke afọ a ga-ebu ụzọ nyocha mbụ. A na-atụ anya na ha ga-eme n'obodo ole na ole, agbanyeghị na-enyebeghị nkọwa banyere nke a n'oge a. Ndi otu a nwere obi uto na nkwekorita a ma hu ya dika ohere di uku na ikpe.
Mgbe Huawei guzo dị ka onye emeriri na nke a. Onye nrụpụta nke China ahụla ọtụtụ ihe mgbochi na ahịa mba ụwa mgbe ọ na-arụ ọrụ na ntanetị 5G. Ọtụtụ mba achọghị ka ụlọ ọrụ rụọ ọrụ na oke ala ha, n'ihi ụjọ nledo. N’ahịa ụfọdụ, dịka ọ dị ugbu a na Malaysia, Nokia bụ ndị gọọmentị họpụtara siri ike.
Kedu ihe dị iche n'etiti 5G na 4G?
Ọ bụ ya mere, O nwere ike ịbụ na otu ihe a ga-eme na Europe. Enweela ụfọdụ mba na ọnwa ole na ole ahọrọla ịmekọrịta Nokia na Ericsson na ntinye nke 5G, kama iji Huawei. Yabụ ọ ga-abụ n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta ozi gbasara nkwekọrịta ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia jiri ohere ọjọọ nke Huawei gbasaawanye ọnụnọ ya na 5G
Samsung na Xiaomi, ụdị ndị kachasị achọ maka nsogbu Huawei
TikTok amalitela WhatsApp nke ya. Ebumnuche na-esote? A Spotify maka China